Iinsetjenziswa zokukhwela ukugqoka izicathulo nesembozo ongaxazulula imisebenzi eminingana - ukulondoloza ukuhlanzeka luhlobo ukuze akhulule iziguli nemikhawulo kulengqungquthela ubuhlungu isikhathi ukusetshenziswa izicathulo.
Shoe ihlanganisa - isikhathi eside kokusungulwa akuyona ukuya e ezizukulwaneni ezikude, singakhumbula le galoshes, okuyizinto uhlobo kabusha ezisebenzisekayo izicathulo izembozo. Injongo yokuqala yaleli yokugqoka yayiwukuvikela izicathulo ezibizayo ekulimaleni, ukuthola ezimanzi, ukungcola ngokweqile. Kuyo yonke le minyaka, steel izicathulo ihlanganisa ukwenza imisebenzi eyahlukene, manje neqhaza ekulondolozweni ukuhlanzeka nokuhleleka inzalo izibhedlela. Ukugcina izicathulo kusuka ukungcola, bajwayele ezindaweni zokwakha, kanye nemidlalo asebenzayo (ezifana ngebhayisikili) nokunye. D.
izicathulo Modern ihlanganisa ingxenye enkulu yeminyaka alahlwayo, ukusetshenziswa kwazo kuphoqelekile lapho bevakashela imitholampilo, izibhedlela, ukunakekelwa kwezempilo izikhungo. Thola iscathulo sakho futhi manje zisebenzisa kubo akunzima. Kunoma yezokwelapha isikhungo indawo yokulinda efakwe ama-apharathasi, icala isamba esithile kwezimali alahlwayo nezicathulo ezivikelayo. Ukusebenzisa kwabo kunciphisa inani yokuhlanza oludingekayo kanye magciwane ezengeziwe, igcina ezingeni ofanele inzalo ubuncane, kunciphisa inani silethwe Amagciwane kanye ivikela phansi ekulimaleni.
Indlela elula wagqoka izicathulo nesembozo - zenzele wena, isenzo ilula ngokwanele, kodwa kunemiphumela. Ngemva donning self-ukuvikelwa ku izicathulo edingekayo ukuba zigeze izandla, akusiyo njalo kungenzeka. Ngo nezikhungo zezokwelapha akuvamile hamba abantu bephile sáka, iningi leziguli anempilo ebuthaka, futhi agqoke isicathulo ihlanganisa ezimweni ezinjalo kunzima kakhulu. Indlela aphume izimo ezinzima ziba kwedivayisi kwamanethiwekhi ukugqoka izicathulo nesembozo, bakwazi ukusizakala ngisho nabantu sinokulinganiselwa okukhulu e ukunyakaza.
Mshini wokuqala inombolo encane nemisebenzi - emva ukulungisa yokukhokha etholwe umamukeli ewa ambalwa izicathulo nesembozo, izinyathelo benziwa bebodwa. sesimanje Okwalandela kakhulu ukunqinda amadivayisi hlinzeka them zaziziningi izici, lapho ukuzibandakanya womuntu kukhawulwe inkokhelo, kudivayisi ngesikhathi esifanayo wagqoka kanye zikhumule izicathulo zakho ngigqoke ngokuzenzakalelayo.
Iinsetjenziswa zokukhwela ukugqoka izicathulo nesembozo anezinye izixazululo ezakhayo, kodwa isimiso yokusebenza yiyona kuwo wonke efanayo - agqoke unyawo ukuma futhi imizuzwana embalwa phezu izicathulo ezigugile bahila.
Iyatholakala ezimbili zama-amadivayisi:
kudivayisi Mechanical. Imililo okubeka ngokucindezela inkinobho ethize, ebusweni.
Idivayisi ngamandla. Unyawo ibekwa niche nge izinzwa ke kwabangela donning uhlelo zokuzivikela ku izicathulo.
Abakhiqizi ufuna izindlela ukuthuthukisa induduzo futhi wasungula kwedivayisi kwamanethiwekhi ukugqoka izicathulo ihlanganisa ne uhlamvu lwemali, thatha amanothi kanye anemisila isibambo, okuyinto kungaqondakala ngesikhathi ukusetshenziswa umshini. Ukuthuthukiswa zakamuva yidivayisi ifakwe i isibonisi LCD futhi umsindo. Izindleko zale divayisi iyamangalisa (acishe abe yizinkulungwane 42), kodwa usebenzisa kungaba nabantu abakhubazekile.
Kungakhathaliseki uhlobo idivayisi, injongo yabo eyinhloko ukugqoka izicathulo ihlanganisa izicathulo. Kuze kube muva nje, ukuvikelwa kuyinto imikhiqizo ngomumo eyenziwe hlorpolietilena, polyethylene, kanye Indwangu okungezona nokwelukiweyo. Izimoto zokuqala refueled cartridges nomthamo 100-200 izingcezu imikhiqizo, onobuhle ethuthukisiwe ukukhonza abantu 500. Lolu hlobo idivayisi akaphelelwa ukuhlobana futhi uyaqhubeka ukuthuthukisa, izindleko izindlela zakamuva zokhahlamba kusuka ruble ayizigidi 18-42, intengo sokugcina kuncike umthwalo sokusebenza.
Cassette umthamo ivumela ukukhonza izivakashi mayelana 500.
inkonzo Quick 3 imizuzwana ngayinye ngigqoke.
umshini ukuseviswa (ukuboniswa inombolo eyodwa esele okuvela kuyo izicathulo nesembozo, amakhasethi agcwaliswa ngokushesha).
I ezahlukene ukusetshenziswa ezindaweni zomphakathi lapho kunesikhala ukufaka ama-apharathasi umile ngoba donning ngokuzenzakalela izicathulo izembozo.
Sikhanyisiwe waphansi ngokubeka izicathulo ihlanganisa ne ifilimu plastic, okuyinto izimboze isihlangu. Idivayisi kuyinto umqulu ifilimu, ezinye zazo ihlinzekwa endaweni lapho unyawo Kumiswa. Udonga ohlangothini liyisici olawula ukunikezelwa agcwalise isisu ngomoya wasempumalanga, okuyinto licindezele ifilimu emhlabeni izicathulo banoma iyiphi isayizi.
isikhathi service esikhathini esingaphansi 7 imizuzwana, umqulu ifilimu kwanele ezisonga 500. Lolu hlobo imishini ngokuvamile unikezwe umsebenzi ezengeziwe izicathulo ezomile. Termoapparat ngokubeka ku izicathulo ihlanganisa, kuye ngokuthi inani imisebenzi kanye namandla ivela ruble ayizigidi 41. Amamodeli yalolu hlobo kukhona icwecwe futhi yakhelwe amakamelo nge maneuverability okusezingeni eliphezulu uma udinga ukukhonza ngokushesha inani elikhulu labantu, ngaphandle kokudala emgqeni.
Ijubane eliphezulu of service (5-7 imizuzwana).
Ukuhlanzeka. Isidingo zokukhwabanisa mathupha.
Ukusebenziseka. Isetshenziswa Thermo amelana umonakalo lokukhanda.
I compact amayunithi ephathekayo usebenze athutha, Ubukhulu nesisindo uvumele idivayisi ezokuthutha ezandleni zakhe. Machines Site ukubekwa bese usebenzisa emahhovisi, zokuhlala, okuyinto akulindelekile inani elikhulu lezivakashi. Izindleko onobuhle zokhahlamba kusuka ruble 3.5 kuya kwezingu 5, kuncike nomthamo cassette nge isihlangu izembozo.
Ukuthwaleka. Idivayisi akudingi unomphela ukufakwa indawo, efakwe futhi isuswe ngokushesha. Usayizi ezincane nesisindo uyivumele ukuhambisa oyedwa nabanye umzamo inyumbazana kungenzeka yokuma buthule egumbini.
Lula ukusetshenziswa kanye nesondlo. It Akudingi ulwazi olwengeziwe ukuze uqale ukulungisa iphutha futhi ukulungele ukusebenza ngokushesha emva ukushaja igobolondo.
Kufakiwe kuphi futhi akusho luthathe indawo enkulu.
Iinsetjenziswa zokukhwela ukugqoka izicathulo nesembozo kule nguqulo mobile ngokuvamile ixazululwe in umklamo yesimanje futhi kufanelekile yimuphi elingaphakathi.
imodeli Compact lunamandla afika ku 50 ngazimbili of izicathulo izembozo.
Kwabaningi sifisa osomabhizinisi kwedivayisi kwamanethiwekhi ukugqoka izicathulo nesembozo - isiqalo esihle. Akudingi ukutshalwa kwezimali ezinkulu, izisebenzi zombuso kanye nokuqapha njalo umsebenzi. Uma olususwe ukufakwa fixed, ngemuva kwalokhu okudingekayo kuphela ukugcwalisa unikeza.
izinkampani zasekhaya kukhona emakethe imifanekiso yabo amadivayisi e yokufunwa kakhulu, okuyinto esilungele bonke abahlanganyeli kule nqubo. Ukuze umthengi, oye yanquma ukuvula inkampani Vending, kukhona njalo ukuthi kungenzeka ukuba uxhumane nomthengisi iseluleko, inkonzo nokuqinisekiswa kwekhwalithi. A umkhiqizi kuyinto emakethe enkulu somkhiqizo.
Ngaphandle izinkampani Russian abe funa eqinile kudivayisi amazwe ukugqoka izicathulo nesembozo (Minsk nomkhiqizi ukhiqiza imishini ephezulu). Belarus ngenjabulo thatha yemakethe ukukhiqiza onobuhle olungamelana mncintiswano ngokunikela inkonzo lowengetiwe ngendlela amaphuzu izimoto inkonzo futhi ukulungisa. Ngokwesibonelo, inkampani Belarusian "VendingBay" linikeza eziyisithupha izinhlobo amadivayisi ukugqoka izicathulo nesembozo futhi uchungechunge eminye imishini, isevisi lapho kuphela zehla yokugcwalisa cartridges nge izimpahla.
Omunye abakhiqizi ethandwa kakhulu izinto kuyinto Korean inkampani BXG, onguchwepheshe imikhiqizo senzelwe izinkampani ezisebenza emkhakheni wemisebenzi. Emakethe Russian inkampani afakwe 2005 kanye supply ephezulu imishini izinga.
Enye yezindawo ethandwa kakhulu ukuthuthukiswa kanye ukukhiqizwa isibe apharathasi ngokubeka ku izicathulo ihlanganisa BXG. Yonke imikhiqizo abe nesitifiketi ikhwalithi egcina izigaba eziningana control, ukuze imishini ihambisana namazinga omhlaba kanye Russian Amazinga State. Le nkampani inyathelisa nemishini ukugqoka izicathulo ihlanganisa izinhlobo ezine:
amandla kagesi kusukela kuyunithi umile (BXG-ASC-200). Kuvele isibonisi LCD, a esicathulweni Kulayishwa amakhasethi, inombolo yabo kuhluka amayunithi 100 200. donning isivinini imizuzwana 2.8-3.5. Ukuze imishini yesiqinisekiso isikhathi senkonzo isikhathi sezinyanga ezingu-12.
Omunye onobuhle ezithandwayo - BXG-ASC-100. Ifakwe isibambo, ngoba lapho umsebenzisi ubambe idivayisi ngesikhathi ukusetshenziswa. isinyathelo okuzenzakalelayo kuthatha imizuzwana 2.8-3.5, inani izingcezu ukulandwa of izicathulo ihlanganisa 100-200.
Amabili ephathekayo imodeli umshini BXG-SC-60 futhi BXG-SC-60A. Umgomo we operation - Mechanical, izicathulo ihlanganisa inani izingcezu 60. Umehluko phakathi onobuhle kuyinto umehluko elincane amayunithi wesisindo: BXG-SC-60A laden ukala 5.8 kg, futhi imodeli BXG-SC-60 inobungako 5.3 kg.
Isisetshenziswa zezikhungo wezokwelapha kakade ajwayelekile, kuhlanganise ama-apharathasi ngokubeka ku izicathulo izembozo. Impendulo kusuka kubasebenzisi bekulokhu muhle kakhulu, libonisa ukuthi asikho isidingo emgqeni ekhemisi for a pair of izicathulo nesembozo, ezishintshayo ikuvumela ukuba ugcine izandla zakho zihlanzekile. Kulabo abane nobunzima ukuhamba noma akakwazi bend, othomathikhi donning izicathulo nesembozo kwenza ukuba ugweme ubuhlungu, futhi bakuqonda ngokugcwele inkonzo njengoba omunye the best ezisunguliwe.
imibono engakhi uzwakalise ngokumelene amadivayisi kahle-isebenze ukuthi angamukela yokukhokha, kodwa enganikanga pair wayefisa izicathulo, noma ukugqoka alahlwayo ngomlenze owodwa izingcezu ezimbili izicathulo izembozo.
Okuzenzakalelayo Bulkin AB-46: ekuhlaziyeni izici futhi amaqiniso athakazelisayo
Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini isibhamu umlomo wombhobho? Ukuzingela sokuzingela kufaneleka
Lokulinganisa - lezi zikhali, igemfe yokuxhuma kanye nekhala ...
Indlela yokwenza izintambo ngoba ibha ovundlile: amathiphu
Barbecue hlupha ngezandla zabo kusuka isitini. Amaphrojekthi izoso izoso
Kuskovo Manor Sheremetev: umlando, izithombe
Ubani osaziwayo ubulawe isifo sengculazi? Ama ababulawa ingculaza